Siyaasada ka Socota Libya | Gabiley News Online
Siyaasada ka Socota Libya
July 8, 2020 - Written by admin
Ciyaarta ka socota garoonada Liibiya iyo Siiriya waa ciyaarta loo yaqaan TSheeska( Chessboard) waa in u mid is dhiibaa ama laga takhalusaa. Waxa beryahan badda mediteeraaneega dhex mushaaxayey maraakiib dagaal oo noocyadoodu kala duwan yihiin sida Fregatka iyo Destroyarka. Hadallo ba’an waxa is dhaafsanaayey Emaanuel Makron Iyo Rejeb Erdogan, midna u dhaxlay Sarkozy ka kalena u dhaxal ka heley Cusmaaniyiintii. Labada Masuul ayaa midba midka kale eedo culculus u jeediyey sida : ” Masuuliyad darro iyo mujrinnimo taariikheed”.
Maraykanka oo ah dawladda ka masuulka ah NATO oo hadda qaadatay halku dhigga ah ” America first” Ameerikaanka mudnaanta leh; ayaa fiirineysa meelo kale: Brussels oo iyadna ah boqorad bila ciidan ah ayaa si dhexdhexaad ah u daawanaysa iyada oo diiday in ay koox la safato.
Faransiiska, oo la xasuusiyo markaste duullaankii u ku qaaday Qaddaafi isago ku doodaayey in u badbaadinaayo dad halis ku jira, ayaa aad uga cadhooday mawqif xumada xulafadiisa kuna dhawaaqay in uu ka baxay hawl galkii uu Nato u hayey ee loo yaqaanay ” Sea Guardian” . Paris oo tidhi waan in aan il gaar ah ku eegno hubka sharci darrada lagu gudbinaayo ee turkidu muharribiinta ka yihiin.
Dgaalka Liibiya, Ruushka o uu hoggaamiyo Puutin oo yaqaan sida saaxadda siyaasadda loogu daanso, ayaa ogolaasho siiyay Turkiga in uu hawl gallo guullo keena ka gaadho Liibiya; isna wuxu ku qasbay Turkiga in Bashaar Assad loo dhaafo xukunka Siiriya. Maraykan arrintaas isna indhuhu ka laabtay.
Faransiiska oo keli ku noqday, ciidamo khaas ahna ay ka joogaan dalka Liibiya, wuxu xidhiidh ba’an la sameeyey dawladdaha u saamaynta ku leeyahay ee loo yaqaan Maghribalcarab.
Qaladaadka uu galayo Faransiisku waa mid loo jeedo. Xabadayntii lagu sameeyey 10 June isaga oo shaqo u haya Nato, gaar ahaan markab dagaal
oo turkigu leeyahay, waxa Faransiiska loo muujiyay taageero buuxda oo laakin afka ah. Nato ma rabto in ay Turkiga waydo iyada oo hadda taxadiiyaad waaweyn kuso fool leeyihiin.